Bhaibheri mune rimwe gore - Shona Bible SCLB - Kurume 4
1. Tenzi akataurira Mosesi achiti,
2. “Taurira vaIsiraeri kuti ngavaburitse kunze kwamatendhe munhu ane chirwere cheganda chakaipisisa naane zvinobuda mumuviri wake naanenge an'oreswa nokubata chitunha.
3. Vanhu vakadai, varume kana vakadzi vaburitsei kunze kwematendhe kuti varege kun'oresa nzvimbo yake yose yematendhe mandinogara.”
4. VaIsiraeri vakaita saizvozvo vakavaburitsa kunze kwematendhe avo sokuudzwa kwakaitwa Mosesi naTenzi.
5. Tenzi akataurira Mosesi achiti,
6. “Udza vaIsiraeri kuti kana munhu atadzira mumwe, munhu iyeyu atopesana naTenzi.
7. Munhu akadaro ngaareurure chitadzo chake aripe mhosva yacho nokubvisa muripo wayo agowedzera makumi maviri pazana roga roga raanofanira kuripa.
8. Kana munhu anogamuchira muripo iwoyo akafa pasinawo hama yake yomumba ingaugamuchira, ngaupiwe Tenzi kuti uzoshandiswa navapristi. Muripo iwoyo ndowokuwedzera pahondohwe inourayiwa panoitwa mupiro wokuripira chitadzo chake.
9. Zvipo zvose zvavaIsiraeri nezvose zvavanenge vaturira kuna Mwari vachizviunza kumupristi ndezvomupristi.
10. Chinhu chipi nechipi zvacho chinenge chaturirwa kuna Mwari nomunhu, chose chose zvacho chinenge chapiwa mupristi nomunhu ndechomupristi iyeyo pachake.”
11. Tenzi akataurira Mosesi achiti,
12. “Udza vaIsiraeri izvi: Ngatiti mukadzi womunhu aita unzenza hwokusatendeka kumurume wake,
13. mumwe murume akarara naye zvikasazivikanwa nomurume wake, pasina amuona, asiye akazvin'oresa. Saka hakuna angamupomere mhosva uye panenge pasina chapupu nokuti anenge asina kubatwa achizviita.
14. Ngatiti murume iyeyo afungidzira mukadzi wake akazvin'oresa, kana kuti mweya wokufungira unouya paari asi mukadzi wake asina kuzvin'oresa,
15. pakadaro murume ngaaende nomukadzi wake kumupristi. Ngaauye nechibayiro chinodiwa kuti chipirwe iye cheupfu hwebhari hunorema kirogiramu rimwechete. Asi ngaarege kuisa mafuta eorivhi muupfu ihwohwo, kana kuhuisa rusenzi nokuti iwoyo mupiro wembesanwa weshanje, unoreva kuti pakaparwa mhosva inofanira kuyeukwa.
16. “Mupristi ngaaunze mukadzi iyeyo andomumisa pamberi paTenzi.
17. Mupristi ngaadire mvura inoera mumudziyo wevhu, anokore ivhu romutendhe rinoera ariise mumvura iya.
18. Mupristi ngaamise mudzimai iyeyo pamberi paTenzi ngaarudunure vhudzi romukadzi iyeyo, amubatise mumaoko upfu hwemupiro wembesanwa weshanje unoreva kuti paparwa mhosva inofanira kuyeukwa. Mupristi ngaabate mumaoko ake mbiya iya ine mvura inozhurungunda kuvava yokurengeresa rushambwa.
19. Mupristi iyeyo ngaaite kuti mukadzi uya apike mhiko yokuti, ‘Kana usina kutorana nomumwe murume kana usina kutsaukira kunezvakan'ora uri mumaoko omurume wako mvura iyoyi yokurengeresa nayo rushambwa ngairege kuwana chainokuita.’
20. Asi kana wakaita zvako zvounzenza, iwe uri mumaoko omurume wako, uyezve kana iwe wakazvin'oresa uchitorana nomumwe murume asiri murume wako,
21. pakadai mupristi ngaatsidzire mukadzi iyeyo rushambwa achiti kumudzimai, ‘Tenzi ngaaite kuti urengererwe pakati pavanhu vakwako uzvimbe dumbu, upfudzike pamuviri.’ Mukadzi iyeyo ngaadaire achiti, ‘Ameni, ngazvive saizvozvo.’
22. “Mvura iyi inopa rushambwa ngaipinde nomudumbu mako, muviri wako uzvimbe, upfudzike pamuviri. “Mukadzi iyeyo ngaati, ‘Ameni, ngazvive saizvozvo.’
23. “Mupristi ngaanyore kurengerera rushambwa ikoku, mubhuku asukire zvanyorwa zviya mumvura iya inozhurungunda kuvava.
24. Mupristi ngaamwise mudzimai mvura iyoyo inozhurungunda yokurengeresa. Mvura iyoyo yokurengeresa rushamba ichapinda maari igomurwadzisa zvakanyanya.
25. Mupristi ngaatore upfu hwemupiro weshanje pamaoko emudzimai iyeyo ahusumudzire kuna Tenzi achipira mupiro wembesanwa paatari.
26. Mupristi ngaanokore tsama yahwo yechirango ahupise paatari. Shure kwaizvozvo ngaanwise mukadzi iyeyo mvura iya.
27. “Mupristi kana achinge amunwisa mvura iya, kana mukadzi iyeyo achinge akazvin'oresa asina kutendeka kumurume wake, mvura yokurengeresa rushambwa ichamupinda igomurwadza zvakaipisisa. Ichafufumisa muviri wake kuzvimba, achazvimba dumbu agopfudzika pamuviri; achave munhu akarengererwa rushambwa pakati pavanhu vokwake.
28. Asi kana mukadzi iyeyo asina kuzvin'oresa akachena, hapana chinomuwana, uye achava nembereko zvake.
29. “Uyu ndiwo murao wakanangana nezveshanje, kana mudzimai achinge atsauka aita zvounzenza zvake achizvin'oresa, iye ari mumaoko omurume wake,
30. uye kana murume apindwawo nomweya weshanje, oitira mukadzi wake shanje. Ngaaunze mukadzi wake pana Tenzi, mupristi aite kune mukadzi iyeyo zvose zvinorehwa nomurawo uyu.
31. Murume wake achashamba mhosva iyi maoko, asi mukadzi iyeyo achawana mubairo wouipi hwake.”
1. Tenzi akati,
2. “Iti kuvaIsiraeri kana munhurume kana munhukadzi akaita mhiko inokosha achipikira kuva muNaziri achizviturira kunaTenzi,
3. ngaarege kunwa waini kana doro. Ngaarege kunwa vhiniga yakaitwa newaini kana nedoro kana kunwa muto kana kudya magirepisi manyoro kana akaomeswa.
4. Mazuva aanenge ari muNaziri ngaarege kudya chinobva pamuti womugirepisi kunyange mhodzi dzamagirepisi kana ganda rawo.
5. “Mazuva ose aanenge akazvipikira kuva muNaziri ngaarege kuveurwa vhudzi, kana ndebvu dzake nokuti akazviturira kuna Tenzi. Saka ngaarege vhudzi rake richireba.
6. Pamazuva iwayo ose aakazvipira kuna Tenzi ngaarege kusvika pedyo nechitunha,
7. chingave chitunha chababa vake kana amai vake kana chomukoma kana munun'una wake, kana chehanzvadzi yake kana vakafa haafaniri kunzvin'oresa chiratidzo chokuzvipira kwake chiri pamusoro wake.
8. Mazuva ake ose ouNaziri anenge ari munhu akaturirwa kuna Tenzi.
9. “Kana munhu akakaruka afira pedyo nomuNazari musoro womuNaziri iyeyo unobva wan'oreswa. Ngaaveure musoro wake pazuva rake rokuzvichenura pazuva rechinomwe.
10. Pazuva rorusere, ngaaunze njiva mbiri kana hangaiwa mbiri kumupristi kumusuo wetendhe rokusanganira.
11. Mupristi ngaapire imwe yadzo achiita chibayiro chokupirira zvitadzo; imwe yadzo yove yechibayiro chokupisa achichenura muNaziri mukun'oreswa kwaanenge aitwa nechitunha. Pamusi iwoyo ngaaturire zvakare musoro wake kuna Tenzi.
12. Ngaazvitsaurire Tenzi kwamazuva ose aakanga ati anozvitsaurira Mwari. Ngaaunze hwayana ine gore rimwechete yomupiro wokuripa mhosva. Mazuva ake aye okutanga haana basa, nokuti kuzvipira kwake kouNaziri kwakan'oreswa.
13. “Uyu mutemo unosunga muNaziri kana mazuva ake okuzvipira asvika kumagumo, ngaauye kumusuo wetendhe rokusanganira,
14. apire zvipo zvake kuna Tenzi hwayana hono ine gore rimwechete isina chinoshoreka yomupiro wokupisa, nehwayana hadzi ine gore rimwechete isina chinoshoreka yomupiro wokupfupira zvitadzo, nehondohwe isina chinoshoreka yechibayiro chomupiro wokuwadzana.
15. Ngaapirewo tswanda yezvingwa zvisina mbiriso, nezvingwa zvikobvu zveupfu hwakanyatsokuyiwa hwekoroni hwakakanywa namafuta eorivhi, nezvingwa zvitete zvakazorwa mafuta eorivhi pamwechete nomupiro wembesanwa nomupiro wezvokunwa.
16. “Mupristi ngaauye nazvo zvose kuna Tenzi apire nomupiro wake wokupfupira zvitadzo zvake mupiro wake wokupisa.
17. Ngaapire hondohwe yechibayiro chomupiro wokuwadzana kuna Tenzi netswanda yezvingwa zvisina mbiriso. Mupristi ngaapire nomupiro wembesanwa nemupiro wawo wezvokunwa kuna Tenzi,
18. kumusuo wetendhe rokusanganira, aveure vhudzi rake rakamboturirwa kuna Mwari atore vhudzi mumusoro wake wakapirwa kuna Mwari ariise mumoto unenge uri pasi pechibayiro chokuwadzana.
19. “Kana bandauko rehondohwe iya rabikwa mupristi ngaaritore pamwechete nechingwa chisina mbiriso nechingwa chitete chomutswanda chiya, ape zvose muNazari uya aveura vhudzi rake rokuzvipira kuna Tenzi.
20. Mupristi ngaazviite mupiro unosimudzirwa uchipirwa kuna Tenzi. Mugove unoera womupristi pamwechete nechityu chinosimudzwa nechidya chinopirwa. Kana zvose izvozvo zvapera muNazari angachinwa zvake waini.
21. “Iwoyu ndiwo murao unonangana nomuNazari anenge apika mhiko. Kuzvipira kwake kuna Tenzi somuNazari ngakuchengetwe maererano nemhiko yake. Asi kana pane zvimwewo zvaanokwanisa kuita ngaaite zvake. Asi zvouNazari hwake ihwohwo anofanira kuzvichengeta nomazvo.”
22. Tenzi akataurira Mosesi achiti,
23. “Taurira Aroni navanakomana vake kuti kana vava kukomborera vaIsiraeri ngavataure vachiti:
24. “Tenzi ngaakukomborerei akuchengetei
25. Tenzi ngaakucheukei akunzwirei tsitsi
26. Tenzi ngaakutarisei akupei rugare.
27. “Kana vakadoma zita rangu pavanokomborera vaIsiraeri, ini ndichavakomborera.”
8. Ndakachema kwamuri TENZI. Ndakanamata kwamuri TENZI.
9. “Kudeuka kweropa rangu kunowaniseiko kana kudzika kwangu mugomba uye kupinda kwangu mugomba? Huruva ingakurumbidzei here? Ingataure nezvekutendeseka kwenyu here?
10. Teererai TENZI mundinzwirewo ngoni TENZI ndibatsireiwo.”
11. Makasandura kuungudza kwangu kukava kutamba. Makanditakanura saga mukandipfekedza rufaro
12. kuitira kuti ndikuimbirei ndichirumbidza mbiri yenyu ndirege kunyarara TENZI Mwari wangu ndinokutendai nokusingaperi.
1. Tenzi anosema chikero chokunyengedza asi anofadzwa nechikero chiri pamwero.
2. Kuzvitutumadza kukauya kunoteverwa nokunyadziswa asi vanozvirereka ndivo vanoungwaru.
3. Kuva pachokwadi kwavarurami kunovatungamirira asi kukombama kwavanyengedzi kunovaparadza.
22. Vakazosvika kuBhetisaidha, vamwe vanhu vakauya kwaari nomunhu akanga ari bofu. Vakakumbira Jesu kuti amubate.
23. Akamubata ruoko oenda naye kunze kwomusha. Akapfira mate pamaziso ake, akaisa maoko ake paari ndokumubvunza kuti, “Pane chaunoona here?”
24. Akatarisa akati, “Ndiri kuona vanhu asi vanotarisika semiti iri kufamba.”
25. Akaisazve maoko ake pamaziso pake, iye ndokuramba akangoti ndee kutarisisa, ndokubva aporeswa. Akabva avakuona zvakanaka zvinhu zvose.
26. Jesu akamuendesa kumba kwake achiti, “Usamboenda zvako nomumusha umu.”
27. Jesu akaenda navadzidzi vake kumisha yokuSezariafiripi. Vachiri munzira, akabvunza vadzidzi vake achiti, “Vanhu vanoti ndini ani?”
28. Vakamupindura vachiti, “Johani Muombeki, vamwewo vanoti, ndiEriya, vamwewo vachiti, mumwe wavaporofita.”
29. Akazovabvunza achiti, “Ko imi, munoti ndini ani?” Pita akapindura achiti, “Imi ndimi Kristu chaiye.”
30. Jesu akatsindidza kuti vasambozviudza ani naani zvake nezvake.
31. Akazotangisa kuvadzidzisa kuti Mwanakomana womunhu anofanira kutambudzika zvikuru, agorambwa navakuru vakuru, navapristi vakuru, nenyanzvi dzoMutemo, ozouraiwa; asi agomukazve mushure memazuva matatu.
32. Akataura izvi pachena. Ipapo Pita akamutora parutivi ndokutanga kumutsiudza.
33. Jesu akatendeuka akaona vadzidzi vake ndokubva atsiudza Pita achiti, “Ndibvirepo, Satani womunhu! Mafungiro akadai haasi aMwari asi avanhu.”
34. Akazodaidza chita chavanhu pamwechete navadzidzi vake akati kwavari, “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake anditevere.
35. Nokuti ani naani anoda kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nahwo; asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake pamusana pangu napamusana peShoko Rakanaka achahuponesa.
36. Nokuti zvinobatsirei munhu kuwana zvinhu zvose zvapasi pose asi iye achirasikirwa noupenyu hwake?
37. Nokuti chiiko munhu chaangabvise kuti adzikinure upenyu hwake?
38. Ani naani anondinyara kana kunyara mazwi angu pakati pechizvarwa ichi chenzenza dzavanhu nechavatadzi, Mwanakomana womunhu achamunyarawo musi waanouya aine mbiri yaBaba vake pamwe navatumwa vatsvene.”